Astaamaha iyo howlgalka bamka kuleylka dhulka hoostiisa | Cusbooneysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | | Tamar-dhuleedka
Qormooyinki hore waxaan kaga hadalnay kululaynta dhulka. Dhexdeeda, waxaan ka wada hadalnay mid ka mid ah waxyaabaha lagama maarmaanka u ah adeegsiga kuleylka noocan oo kale ah bamka kulaylka dhuleedka. Hawlgalkeedu wuxuu la mid yahay kan bamka kuleylka caadiga ah. Si kastaba ha noqotee, tamarta kuleylka ah ee ay isticmaasho waxaa laga soo saaraa dhulka.
Ma rabtaa inaad si qoto dheer u ogaato hawlgalka iyo astaamaha matoorka kulaylka dhuleedka? Macluumaadkani aad ayuu faa'iido u yeelan karaa haddii aad gurigaaga ku rakibayso kuleyliyaha 🙂
1 Bamka kuleylka dhulka hoostiisa
3 Siyaabaha loo soo saaro tamarta dhuleedka
4 Bamka kuleylka dhulka hoostiisa iyo taagan
5 Maalgashiga dhaqaalaha bilowga ah
Si aan u cusbooneysiiyo fikradaha oo aan uga shaqeyno inta ka hartay maqaalka, waxaan dib u eegi doonnaa qeexitaanka kululaynta kuleylka. Waa nidaam kululeyn ah oo aan ugu isticmaalno biyo kulul kuleylka dhismaha. Kuleylkaas wuxuu ka yimaadaa dhagaxaanta ama biyaha dhulka hoostiisa wuxuuna awood u leeyahay inuu shaqeeyo matoor koronto dhaliya. Waa fikrad, sidaa darteed, gudaha tamarta dhuleedka.
Mashiinka kuleylka ee kuleylka ayaa ka shaqeyn kara meel kasta. Isticmaalkani wuxuu ku faafay bulshada oo dhan, illaa heer sidaas ah way sii kordheysaa 20% sanadkiiba. Markaan taabanno tuubooyinka gadaasha qaboojiyaha, waxaan arki karnaa in kuleylka laga soo qaadayo gudaha qalabka isla markaana u sii gudbinaya jikada inteeda kale. Hagaag, bamka kuleylka wuxuu u shaqeeyaa si la mid ah, laakiin gadaal. Waxay awood u leedahay inay qaadato kuleylka dibedda ku jira oo ay ku sii dayso gudaha. Waxay u egtahay inaad iskudayeyso inaad banaanka qaboojiso.
Labada qaboojiye iyo mashiinka kuleylka, labadaba waxaa ku jira tuubooyin wareega wareega dareeraha qaboojiyaha. Dheecaankani wuxuu awoodaa inuu kululeeyo marka la cadaadiyo oo uu qaboojiyo marka la ballaadhiyo. Haddii aan rabno inaan kululeyno guriga si ay si fiican u joogto xilliga jiilaalka, dareeraha kulul ee la cadaadiyey wuxuu ku dhex wareegi doonaa kuleylka kuleylka ee kululeeya hawada quudinta nidaamka tabinta.
Waxaad dhihi kartaa dheecaanka mar horaba "waa la isticmaalay." Intaa ka dib, way qabowdaa oo ballaadhaa, iyada oo xidhiidh la leh il biyo-dhuleedka oo "dib ugu soo celisa" kuleylka. Nidaamkani waa lagu celceliyaa marar badan kululaynta joogtada ah.
Mid ka mid ah waxyaabaha maskaxda lagu hayo waa in bamgareynta dareeraha ay u baahan tahay koronto. Mashiinka kuleylka ee dhulka ayaa ka waxtar badan bambooyin kale ama kuleylka kale ee lagu beddelan karo. Nidaamyada hadda jira Waxay awood u leeyihiin inay soo saaraan ilaa 4 kW oo kuleyl ah kW kasta oo koronto ah oo la soo saaro. Tani waxay ka dhigeysaa kuwo aad wax ku ool u ah, maadaama aysan u baahnayn inay abuuraan kuleyl, laakiin inay ka soo saaraan dhulka hoostiisa.
Taas bedelkeeda, ma jiraan oo keliya bambooyin kululeeya guriga. Sidoo kale waad qaboojin kartaa guriga si uu qabow ugu noqdo xilliga xagaaga. Bambooyinkan waxaa loo yaqaannaa bambooyin kuleyl dib loo celin karo. Xaaladdan oo kale, waalka ayaa ah kan xukuma jihada dareeraha. Sidaa darteed, kuleylku wuxuu ku wareegi karaa laba jiho.
Siyaabaha loo soo saaro tamarta dhuleedka
Dad badan oo adeegsada kuleylinta noocan ah waxay horeyba uyaqaanaan matoorrada kuleylka dhulka. Faa’iidada weyn ayaa ah in hawada dibedda laga isticmaalo si guriga loo kululeeyo. Kulaylka dhulku waa mid aan xad lahayn, sidaa darteed waxaa loo tixgeliyaa nooc ka mid ah tamarta dib loo cusboonaysiin karo. Waad kululeyn kartaa markasta oo aad u baahato iyo hab aad u raaxo badan oo raqiis ah. Intaas waxaa sii dheer, waxaad gacan ka geysan doontaa daryeelka deegaanka iyo yareynta qiiqa hawada lagu sii daayo ee hawada. Sidan ayaan ku yareyneynaa saameynta xun ee isbeddelka cimilada iyo kuleylka adduunka.
Mid ka mid ah dib-u-dhaca ku yimaadda matoorrada kuleylka ee caadiga ah ayaa ah in wax-qabadkoodu hoos u dhaco marka heerkulka bannaanka uu aad u qabow yahay. Taas macnaheedu waxa weeye marka kuleylka runtii looga baahan yahay wax badan gudaha guriga, mashiinku wuxuu leeyahay waxqabad yar. Si kastaba ha noqotee, tani kuma dhacdo mashiinka kuleylka ee dhulka, tan iyo markii ay ka soo saarto kuleylka gudaha Dhulka. Dhulka hoostiisa kuleylku waa xasilloon yahay heer kulka heerkiisuna waa sidii hore xitaa haddii uu banaanka ka qabow yahay. Sidaa darteed, ma luminayso waxtarka wakhti kasta.
Bamka kuleylka dhulka hoostiisa iyo taagan
Habka ugu caansan ee looga soo saaro kuleylka waa bamka kuleylka dhulka hoostiisa. Badanaa waxaa lagu dhejiyaa 150 ilaa 200 fuudh dusha sare. Dhuumaha ayaa lagu rakibay hareeraha godadka godadka dhulka hoostiisa laga qoday. Biyaha waxay ku dhex wareegaan iyaga oo wata dheecaan ka hortag ah oo awood u leh inuu kiciyo kuleylka si uu u xakameeyo dareeraha qaboojinta.
Beddelka kale waa bamka kuleylka dhulka hoostiisa. Xaaladdan oo kale, tuubooyinka waxaa ka buuxa biyo waxaana lagu aasay ilaa 6 fuudh oo dhulka hoostiisa ah. Iyagu waa nidaamyo u baahan ballaarin weyn si ay u soo saaraan kuleylka ku habboon si loo kululeeyo dhisme dhexdhexaad ah. Si kastaba ha noqotee, qiimaheeda ayaa aad uga hooseeya bamka toosan.
Dad badan ayaa shaki ka qaba waxtarkeeda meelaha ku dhow ilaha biyaha dabiiciga ah sida harooyinka, wabiyada iyo balliyada. Tani ma ahan tan. Mashiinka kuleylka ee heer-kulku wuxuu la mid yahay sida ugu wax ku oolsan meelaha u dhow sidaad ugu isticmaali kartid il kuleyl dibadeed.
Is-weydaarsiga kuleylka ee dhulka bannaanka waxaa lagu maraa ururiyaha dhuleedka, kaas oo noqon kara laba nooc: kuwa dhulka ku soo ururiya iyo kuwa dhulka ku ururiya Xaaladda hore, wareeg ah tuubooyin (2 ama 4) ayaa la gelinayaa gudaheeda dalool 50-100 m qoto dheer iyo 110-140 mm dhexroor. Xaaladda labaad, shabakad jiif ah oo tuubooyin ah ayaa la dhigaa qoto dheer 1,2-1,5 m.
Maalgashiga dhaqaalaha bilowga ah
Caqabad weyn oo hortaagan adeegsiga tamarta la cusboonaysiin karo ayaa ah maalgashiga dhaqaale ee bilowga ah. Sida qaybo badan, waxaa lagama maarmaan ah in la maalgaliyo raasumaalka bilowga ka dibna la sii kordhiyo waqtiga. Qiimaha bilowga ah ee kululaynta kuleylka ayaa ka badan kan nidaamyada kuleylka dhaqameed.
Haddii loogu tala galay in laga dhiso guri qoys wuxuu ku kici karaa inta udhaxeysa 6.000 ilaa 13.000 euro. Tani waa wax aan micno lahayn oo loogu talagay dadkaas oo dhan oo shaqadoodu aysan u helin mushahar badan. Lacagtaas waxaad ku iibsan kartaa gaari! Si kastaba ha noqotee, mashiinnada kuleylka ee dhulka hoostiisa ayaa faa'iido leh mustaqbalka fog. Waxay oggol yihiin inay yareeyaan isticmaalka biilka tamarta ee u dhexeeya 30 iyo 70% markay tahay kuleylka iyo 20-50% qaboojinta.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad diyaar u tahay inaad adeegsato kululaynta noocan oo kale ah oo aad hadda bilowdo keydinta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamar-dhuleedka » Bamka kuleylka dhulka hoostiisa
Warshad tamarta nukliyeerka Cofrentes
10ka warshadood ee ugu awooda badan kuleylka Spain